नारी मनका कथा [पुस्तक: बदाम बेच्ने केटी] - साहित्य - नेपाल
पुस्तक: बदाम बेच्ने केटी | कथाकार : रत्न प्रजापति | प्रकाशक : डिकुरा पब्लिकेसन | पृष्ठ : २३२ | मूल्य : ३९९ रुपियाँ
कथाकृतिको नामबाटै थाहा हुन्छ– रत्न प्रजापतिको रुचि नारी पात्रमै छ । नारीलाई रहस्यमयी नजरले हेर्नु अनि नारीमनका अन्तरकुन्तर छिचोलेर निरन्तर कथाकर्म गरिरहनु उनको लेखकीय विशेषता हो । बदाम बेच्ने केटीमा पहिलो वरीयता पाएको कथा ‘शत्रु’ नै कामकाजी युवतीको कथा हो । अफिस, गाडी र बाटोमा यौनजन्य दुव्र्यवहार झेल्दा–झेल्दा अन्त्यमा आफैँलाई आफ्नो शत्रु घोषणा गर्नुपरेको छ । खोट समाजको दृष्टिकोणमा छ या पात्रका रुपरंगमा ? कथाकार सोझै यस्तो काँडे प्रश्न गर्दैनन् पाठकलाई, युवतीका स्वकीय अनुभूति मात्रै कथामा पोखिदिन्छन्, बस् ।
अरू कथाकारभन्दा कति फरक छन् भने उनी बोक्रे विचारहरूको बन्दी छैनन् । कथाकारिताका नाममा श्लीलता–अश्लीलता, नैतिकता–अनैतिकताको कृत्रिम पर्खाल ठड्याइएको छैन । बरु त्यसबाट पाठकलाई मुक्त गरिएको छ । समाजको साँचो तस्बिर दिनु मात्रै उनको ध्येय लाग्छ ।
रत्नका कथामा सामाजिक यथार्थ र यौन मनोविज्ञान एकअर्काको आलिंगनमा बाँधिएका छन् । ‘ बदाम बेच्ने केटी’ आफैँ आम मानिसका नकारात्मक धारणा पटाक्षेप गरिएको कथा हो । रत्नपार्कमा बदाम बेच्ने युवती सबै देहव्यापारी होइनन् भन्ने निष्कर्ष छ कथाको । कथाको शिल्प पक्ष अलि कमजोर छ ।
बदाम बेच्ने केटीका ३० थान मझौला कदका समसामयिक कथाले स्थानीयपनको आभास पनि दिन्छन् । हरेक सामाजिक समस्याको सम्बन्ध आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिसँग प्रत्यक्ष या परोक्ष जोडिएको छ । पात्रहरू नागर जीवनका जटिलतासँग जुधिरहेका देखिन्छन् ।
रत्न प्रजापतिका कथाका सीमै नभएका पनि होइनन् । कतिपय कथा सस्तामस्ता, सामान्य र सपाट, अझ भन्ने हो भने सिर्फ समाचारको हैसियतका लाग्छन् । प्रश्न उठ्छ– एक दीर्घ कथाकर्मीले त्यसो गर्नु जरुरी छ ? राजा कथा मात्रै टिपे हुन्न ?